World March Newsletter - Gore Idzva Rinokosha
01 / 01 / 2020 kubudikidza Antonio Gancedo
Iyi "Gore Idzva Rinokosha" Bulletin inovavarira kuratidza pfupiso yezviitiko zvese zvinoitwa pane peji rimwe. Ndeipi nzira iri nani yekuita izvi pane kupa mukana kune ese matsamba etsamba. Isu tinoratidza maBulletins akaburitswa mu2019, akarairwa kubva kwekupedzisira kusvika kwekutanga uye akaiswa muzvikamu zvishanu zvemabhuru matatu ega ega. Tinoshumira
World March Newsletter - Nhamba 15
31 / 12 / 2019 29 / 12 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
Tiri kuuya kumagumo egore, vatengesi vari muArgentina. Ikoko, kuPunta de Vacas Study uye Reflection Park, kuMendoza, zviitiko zvichavharwa zvegore rino. Takatanga tsamba iyi pamwe nechiitiko chekupedzisira gore iro vafambi vaibata kuPunta de Vacas Study uye Reflection Park, muPunta
World March Newsletter - Nhamba 14
25 / 12 / 2019 24 / 12 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
Isu tinopa pano zvimwe zviitiko umo Vatambi veInternational Base Team vanoita pavanenge vachienderera mberi nerwendo rwavo rweku America uye nezvimwe zviitiko zvinoitwa munyika dzakawanda. Vatsigiri venyama yechipiri Kurume vanosangana nevadzidzi vechikoro chaJosé Joquín Salas. Izvi zvakaziviswa uye
World March Newsletter - Nhamba 13
29 / 12 / 2019 24 / 12 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
Izvo zvinoitwa neBase timu ye2nd World Kurume inoenderera muAmerican kondinendi. Kubva kuEl Salvador yakaenda kuHonduras, ichibva ikoko ichienda kuCota Rica. Ipapo akaenda kuPanama. Zvimwe zvezviitiko zvinoitwa munzvimbo dziri kure nekwave neBase Team kucharatidzwa. Nezve Kurume neGungwa, isu tichaona izvozvo
World March Newsletter - Nhamba 12
21 / 11 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
Mune ino bulletin, tichaona kuti Base Chikwata che2 World Kurume uye Runyararo yakasvika muAmerica. MuMexico, vakatangazve mabasa avo. Tichaona zvakare kuti zviitiko zvinoitwa mumativi ese epasi. Uye kuti, negungwa, kufora kunoenderera pakati pezvinetso nemufaro mukuru. Tichaona mamwe mazuva a
World March Newsletter - Nhamba 11
16 / 11 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
MuBulletin iyi tichaita nemabasa anoitwa muchirongwa cheMar de Paz Madhiri, kubva pakatanga kusvika paBarcelona maive nemusangano mune Peace Boat yeHibakushas, ​​vapukunyuki veJapan veHiroshima neNagasaki Bombs, Runyararo Chikepe muBarcelona. Iyo 27 ye
World March Newsletter - Nhamba 10
Mune zvinyorwa zvakaratidzwa mugwaro rino, Base Team yeWorld March inoenderera muAfrica, iri muSenegal, chirongwa "Gungwa reMediterranean Runyararo" chave kuda kutanga, mune dzimwe nzvimbo dzepasi pano zvese zviri kuenderera mberi. Mune tsamba ino tinobata nezve zviitiko zveBase Team mu
World March Newsletter - Nhamba 9
02 / 11 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
Yechipiri World Kurume yakabhururuka kubva kuCanary Islands kuenda, mushure mekumhara muNouakchott, kuenderera nerwendo rwayo kuburikidza nekondinendi yeAfrica. Tsamba ino ichapfupisa zviitiko zvakaitwa muMauritania. Boka repasi raKurume rakagamuchirwa naFatimetou Mint Abdel Malick, Mutungamiri weNouakchott Dunhu. Gare gare, pakave nekusangana ne
World March Newsletter - Nhamba 8
30 / 10 / 2019 30 / 10 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
Iyo 2 World Kurume inoenderera munzira yayo kuburikidza nenyika dzeAfrica uye, mune imwe nzvimbo yepasi, Kurume inoenderera nezviitiko zvakawanda. Iyi tsambanhau inoratidza kushandura kwezviito zvedu. Inoita paramende, miganhu, kushamwaridzana-kunamatira, zvekunamatira, zvakatemwa senge “Gungwa reMedithera re
World March Newsletter - Nhamba 7
29 / 10 / 2019 29 / 10 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
Netsamba iyi tsamba yechipiri World March inosvetukira kuAfrica, tichaona kupfuura kwayo kuburikidza neMorocco, uye mushure mekubhururuka ichienda kuCanary Islands, zviitiko mu "zviwi zvine rombo". Kupfuura nemuMorocco Mushure memitezo yakati wandei yeBase Team yeMarch vakasangana muTarifa, vamwe kubva kuSeville uye vamwe vanobva kuPort of Santamaría, pamwechete